Wongorora zvese nezve maSarudzo neiyo yepamutemo app yeHurumende | IPhone nhau
Wongorora zvese nezve maSarudzo nehurongwa hweHurumende hwepamutemo
Semakore apfuura takatsoropodza nemwoyo wese kuregeredzwa kwemasangano zvine chekuita nemaapplication e iPhone uye nharembozha kazhinji, pachiitiko ichi tinofanirwa kuombera nekuti kubva Ushumiri hweInternational basa rinopfuura rine chiremerera rakaitwa ne 26J kunyorera kweGeneral Sarudzo muSpain. Ngatitarisei uye tione kuti sei.
2 Inogona kuvandudza
Patinongotanga isu tinofanirwa kusarudza mutauro watinoda iyo app (kubva pakati pemitauro yese yepamutemo yatinayo muSpain), uye kubva ipapo tinopinda menyu kubva kwatinogona tsvaga mhedzisiro kupera kwesarudzo dzakaitika mazuva achangopfuura mudunhu reSpain.
Mukutaura mashandiro acho anomiririra isu mhedzisiro kukongiresi mumasekondi maviri (2015 na2016) kuitira kuti tikwanise kutenga pakati pemhedzisiro yemaviri aya, nepo pazasi tichiona runyoro rwakakwana uye rwakadzama rwevatevedzeri vemapato akasiyana awana kamwe chete mavhoti.
Kune rimwe divi, tinogona tsvaga data rese yekutora chikamu (kusanganisira ruzivo pamusoro pemavhoti asina basa, kusabvisa uye mavhoti asina chinhu), kuve nekukamuranisa ivo vaviri nemaAutonomous Communities uye nechero yevagari vese varipo munharaunda yeSpain.
Iko kunyorera kunozadzisa basa rayo kupfuura (uye hazvisi kuti tiri kuzoishandisa zvakanyanya, hongu), asi iine zvimwe zvandinofunga ini pachangu inogona kuvandudzwa pasina mutengo usina kukodzera wenguva.
Kune rumwe rutivi tinowana inononoka kuchinja. Mune iyo iPhone 6s semuenzaniso, ichiri isina kunyorova zvakanyanya, zvinova zvakaoma kunzwisisa kunze kwekushomeka kwekushandisa kwechishandiso kana uchishanda neinoenderana API.
Chekupedzisira, zvakakosha kuti uongorore dhizaini kuti kunyangwe padanho repasi rose ichipfuura iyo yakatenderwa, iwo madiki madiki ivo vanokundikana kusangana neIOS. Yakakura miseve mikuru, zvisingaenzanisike mifanikiso, uye mamwe akanyanya kuderera mafonti ingori mashoma ekubata kwezvinhu izvo zvinogona kuchinja kuita kuti iyo app inzwe zvishoma 'kumba' kana ichishandiswa pane iPhone.
Ehezve iko kunyorera haina mutengo zvakabatana kana zviziviso, sezvazvinofanira kutarisirwa, sezvo zvichibva ku Ministry of the Interior pachayo sezvatakatombotaura kare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Wongorora zvese nezve maSarudzo nehurongwa hweHurumende hwepamutemo